Ny thalamus dia be dia be, ary be dia be ny loko marevaka milevina eo ambanin'ny cerebral cortex . Izy io dia tafiditra amin'ny fahatsapana ara-tsaina sy ny fanaraha-maso ny asan'ny motera. Ny thalamus dia rafi-pandaminana mifangaro ary mampifandray ireo voan'ny cortex mendri-kaja izay mifandray amin'ny fahatsapana ara-tsaina sy ny fihetsiketsehana amin'ny ampahany hafa amin'ny atidoha sy ny tadin'ny hazon-damosina izay manana anjara amin'ny fihetseham-po sy fihetsiketsehana ihany koa.
Amin'ny maha-mpandamina ny fampahalalam-baovao azo tsapain-tànana, ny thalamus koa dia mifehy ny torimaso ary mampifoha ny toetry ny fahatsiarovan-tena. Ny thalamus dia mandefa famantarana ao amin'ny atidoha mba hampihenana ny fiheverana sy ny valinteny amin'ny fampahalalana azo tsapain-tanana, toy ny feo mandritra ny torimaso.
Ny thalamus dia tafiditra amin'ny andraikitra sasantsasany amin'ny vatana, ao anatin'izany:
Mahazo Audience, Somatosensory, ary Visual Sensory Saina
Relays Sensory Signals amin'ny Cortex Cerebral
Fanabeazana fahatsiarovana sy fanehoana fihetseham-po
Mifehy ny tory sy ny Mifohaza
Ny thalamus dia mifandray amin'ny nerlandey sy ny hippocampus . Ankoatra izany, ny fifandraisana amin'ny tadin'ny hazon-damosina dia ahafahan'ny thalamus mahazo fampahalalana misimisy avy amin'ny rafi-pandrefesana sy ny faritra maro ao amin'ny vatana. Avy eo dia alefa any amin'ny faritra misy ny atidoha izany fampahalalana izany. Ohatra, ny thalamus dia mandefa fanazavana mampihetsi-po amin'ny sombin-tany somatosensory ao amin'ny teboka parietal .
Izy io dia mandefa fampahalalam-baovao amin'ny sehatra ara-pahitana ao amin'ny efitranon'ny traikefa ary misy mirakitra haino aman-jery dia alefa any amin'ny valanoranon'ny horohoro ara-nofo .
Amin'ny ankapobeny , ny thalamus dia miorina eo an-tampon'ny atidoha , eo anelanelan'ny cortex cerebral sy midbrain . Ambony noho ny hypothalamus .
Ny thalamus dia mizara ho fizarana telo amin'ny alàlan'ny mediamary lamina. Ity fotony mitovitovy amin'ny fotony vita amin'ny fotony ity dia mampizarazara ny thalamus amin'ny ampahany, ny medaly, ary ny ampahany.
Ny thalamus dia ampahany amin'ny diencephalon . Ny diencephalon dia iray amin'ireo fizarana roa lehibe amin'ny forebrain. Anisan'izany ny thalamus, hypothalamus , epithalamus (ao anatin'izany ny pineal gland ), ary ny subthalamus (ventral thalamus). Ny rafitra Diencephalon dia mamorona ny gorodona sy ny rindrina amin'ny rihana fahatelo . Ny ventrikela fahatelo dia ampahany amin'ny rafi-pifandraisana mifandraika ( ventrils cerebral ) ao amin'ny atidoha izay manitatra mba hamorona ny lakandrano afovoan'ny tadin'ny hazon-damosina .
Ny fahavoazana amin'ny thalamus dia mety hitondra olana maro mifandraika amin'ny fahatsapana ara-tsaina . Ny aretina Thalamic dia toe-javatra izay mahatonga ny olona hiaina fanaintainana tafahoatra na fahaverezan'ny fahatsapana amin'ny tongony. Mety hiteraka olana ara-pahasalamana ny fahapotehana amin'ny faritra misy ny thalamus izay mifandray amin'ny fizotran'ny fahitana. Ny fahavoazana amin'ny thalamus koa dia mety miteraka olana amin'ny torimaso, olana amin'ny fahatsiarovan-tena, ary ny olan'ny fihainoana.
Anatomy sy ny asan'ny olombelona
Mandra-pahoviana no ho velona tsy misy sakafo, rano, matory, na rivotra?
Anatomy of the brain: Function Cerebellum
Ireo mpilalao gilasy malaza izay nahazo volamena
Fomba hisorohana ny lova ao Java amin'ny fampiasana ny teny fanalahidy farany
Moa ve ny Fitsarana Tampony Manome Fanjakana an'i Amerika?
Ny fomba hahazoana tsara amin'ny fandresena ny baolina kitra
University admissions of State University
Fa maninona ianao no mahazo fahitana mandalo amin'ny endriny sy ny fomba fampiasana azy
Fanenjehana sy fitsipi-pitenenana
Famintinana ny lahateny nataon'i Arthur Miller tamin'ny "Zanako rehetra" roa
Ny Compromise Crittenden mba hisorohana ny ady an-trano
Statistiques de Bowdoin College Admissions
Kitapom-bitsika mora Emerald Geode Crystal
Spotfin Croaker: Mpanjakan'ny Pasipaoro Pasifika
Ny anaran'ny GIORDANO sy ny tantaram-pianakaviana
Ny Fikambanam-pirenena misy ny vehivavy voakolokolo: ady amin'ny rariny ara-piaviana
Ny tsy fitovizan'ny harena
Meksikana mandray anjara amin'ny Ady Lehibe II
Ny momba an'i Grimpoteuthis, ny Octopus Dumbo